Melite ma bulie MX-Linux 19.0 na DEBIAN 10.2 mgbe ị wụnye | Site na Linux
N'ime akwụkwọ a, anyị ga-aga n'ihu ịnye a usoro a na-ahụkarị na melite ma bulie, ma MX Linux Linux 19.0 dị ka DEBIAN 10.2 mgbe ị wụnye, dị ka nke mbụ na-ewuli na nke ikpeazụ.
Iji mee nke a nkuzi anyị ejirila a Faịlụ ISO nke ikpeazu MX-Linux Snapshot, 64-bit, akara ụbọchị Disemba 2019, akpọ MX-19_December_x64.iso, ma onye ọ bụla nwere ike ibudata ihe kachasị ọhụrụ dị na ebe a, na a Faịlụ ISO nke ikpeazu nkwụsi ike nke DEBIAN, 64-bit, maka DVD, nke emere na Nọvemba 2019, akpọ debian-10.2.0-amd64-DVD-1.iso, ma onye ọ bụla nwere ike ibudata ihe kachasị ọhụrụ dị na ebe a.
Nke a ga-abụ nke anyị mbụ post-wụnye nkuzi na DEBIAN 10 - Buster, ebe ọ bụ na ndị ikpeazụ e kere eke dị na mbipute gara aga, DEBIAN 9 - Ngbatị. Ha bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịjụ ha nke ọma, ihe ndị a:
1 Isiokwu ndị gara aga na DEBIAN na MX-Linux
2 Ntinye usoro ntinye na nkwanye iji kwalite, hazie ma bulie DEBIAN 10 na MX-Linux 19
2.1.1 Naanị maka mmelite MX-Linux
2.1.2 Imelite DEBIAN / MX-Linux
2.1.3 Omume omume
2.3 Ebuli elu
Isiokwu ndị gara aga na DEBIAN na MX-Linux
Kedu otu esi ebuli sistemụ arụmọrụ GNU / Linux? (Lee ntinye)
Etu esi hazie sistemu GNU / Linux? (Lee ntinye)
Tụgharịa GNU / Linux gị ka ọ bụrụ Distro kwesịrị ekwesị maka mmepe sọftụwia (Lee ntinye)
Tụgharịa GNU / Linux gị ka ọ dị mma Multimedia Distro (Lee ntinye)
Tụgharịa GNU / Linux gị ka ọ bụrụ àgwà Distro Gamer (Lee ntinye)
Tọghata GNU / Linux gị ka sistemụ arụmọrụ dabara maka Ngwuputa Ngwuputa (Lee ntinye)
Ma ọ bụrụ na, ịchọrọ ịtụle isiokwu ndị gara aga na MX-Linux, ndị na-esonụ dị:
MX-Linux 17.1: Distro nke oge a, ọkụ, ike na enyi (Lee ntinye)
MX-Linux 19 - Beta 1: Distroku Distro # 1 ka emelitere (Lee ntinye)
MX Linux 19: Emeputara ụdị ohuru nke dabeere na DEBIAN 10 (Lee ntinye)
N'ihi isiokwu ndị a, na ndị ọzọ banyere DEBIAN y MX-Linux, ndị na-ekwu banyere Olee otú ha na otu esi etinye ha? Anyị ga-esi ebe a gawa, ozugbo na post-nwụnye usoro, nke ụdị ọhụrụ ndị a dị maka afọ 2020.
Ntinye usoro ntinye na nkwanye iji kwalite, hazie ma bulie DEBIAN 10 na MX-Linux 19
Cheta na omume na nchịkọta akwadoro ebe a ka ị gbaa ma wụnye bụ nke ahụ, "nchịkọta kwadoro", ọ na-adịgidekwa maka nke ọ bụla, imezu ma wụnye ha niile ma ọ bụ ụfọdụ n’ime ha, gịnị kpatara ha dị mkpa ma ọ bụ baa uru, na obere ma ọ bụ ọkara okwu, mara na iji ha, site n'inwe ha ugbua ma ọ bụ wụnye ha.
Ma buru n'uche na omume ndị a na / ma ọ bụ nchịkọta dị nke a nwalere na Distros, ma ghara ịjụ iwepu nchịkọta arụnyere na ndabara na ndị a. Ọzọkwa, ha anaghị eme ka oriri nchekwa ma ọ bụ CPU dịkwuo elu, ebe ọ bụ na ha anaghị ebu usoro ma ọ bụ daemons (ọrụ) na ebe nchekwa site na ndabara. Iji mara tupu ihe ngwugwu ọ bụla ejiri, pịa ebe a.
Naanị maka mmelite MX-Linux
A.- Na-agba ọsọ MX-Mmelite na nchịkọta menu ma ọ bụ site na mmalite menu
B.- Na-agba ọsọ site na a amalite "mgbọrọgwụ nnọkọ", nwụnye nke nchịkọta ndị a na iwu ndị a:
Imelite DEBIAN / MX-Linux
Gbaa site na a amalite "mgbọrọgwụ nnọkọ”(Mgbọrọgwụ @ mycomputer $), nwụnye nke nchịkọta ndị a na iwu ndị a:
1.- Gbanwee onye ọrụ emepụtara ka ọ bụrụ onye ọrụ sudoers sitere na onye ọrụ mgbọrọgwụ
Cheta na: Tinye akara ikpeazụ n'okpuru akara nke kwuru, sị: root ALL=(ALL:ALL) ALL
2.- Melite $ PATH agbanwe na superuser .bashrc faịlụ: Naanị maka DEBIAN 10
Cheta na: Cheta na na mbipute nke "DEBIAN 10" ma ọ bụrụ na ọ maliteghị "mgbọrọgwụ nnọkọ" na iwu «su -» kama «su mgbọrọgwụ» ị ga-mkpa imelite ọdịnaya nke agbanwe "$ PATH" iji gbochie nsogbu igbu iwu, dị ka mgbe ị na-eji iwu ahụ "Dpkg". Ya mere, odi nkpa idozi nsogbu a nwa oge site na itinye ihe "ATzọ" dị mkpa na iwu ahụ «Mbupụ» dị ka ndị a:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ, dozie ya kpamkpam, ị ga-etinyerịrị ndị "ATzọ" Achọrọ dị ka ndị a:
1kpụrụ XNUMX: Site na nkuzi nkuzi
2kpụrụ XNUMX: Site na iwu nano
Ma tinye na njedebe akara ndị a:
Ncheta: Ọ bụrụ na ịbanye iwu ahụ "ya -" mgbe niile, ị nwere ike ịhapụ usoro a.
Okike nke folda ọdịnaya ma ọ bụ ngwa mba ọzọ na «/ opt /»
Nhazi nke nhọrọ nhazi Panel na ihe ya
N'ihe banyere nkuzi a na-ezo aka, DEBIAN na MX-Linux distros con XFCE Desktọpụ Ebe con Whisker NchNhr, nwere ike ịrụ ọrụ ndị a:
Whisker NchNhr: Gbanwee nha, akara ngosi menu, ndepụta nke ngwa ndị ọkacha mmasị, na nhọrọ ndị ọzọ nke taabụ nke "ọdịdị na omume" na-chọrọ na ya Njirimara.
Ogwe menu: Tinye na / ma ọ bụ wepu ngwaọrụ dị mkpa ma ọ bụ chọrọ ma gbanwee ọnọdụ ha na ihe onwunwe ha.
Ọzọkwa, ya na ngwa ahụ Isi Nchịkọta (Alacarte) ha nwere ike Kwado gbanyụọ ngwa a na-ahụ anya na nke achọrọ na Malite NchNhr.
Customizing Desktọpụ Ntọala
Na ngalaba (ngwa) akpọ XFCE Desktọpụ enwere ike ịme ma ọ bụ mgbanwe ndị a:
N'azụ: Họrọ ndabere ma ọ bụ ọtụtụ ma họrọ ngosi ngosi nke otu ma ọ bụ ihe niile.
Menu: Họrọ nhọrọ ndị achọrọ ma ọ bụ ndị dị mkpa sitere na otu: Ntọala desktọọpụ na NchNhr NchNhr.
Oyiyi: Họrọ chọrọ ma ọ bụ mkpa nhọrọ site na edemede: Ọdịdị na Ndi an-kpọ akara ngosi.
N'ihe banyere MX-Linux Nwere ike gbanwee onyonyo dị n’iru site na ime mgbanwe na GRUB isiokwu "Linen" nke na-abịa na ndabara.
N'ihe banyere DEBIAN Nwere ike gbanwee onyonyo dị n’iru site na ime mgbanwe na GRUB isiokwu "Starfield" nke na-abịa na ndabara.
Cheta na: Enwere ike iji aka jiri aka mee mgbanwe a edezi nhazi faịlụ nke GRUB isiokwu eji, mana ọ ka nma itinye ngwa ahụ "GRUB Customizer" ma mee mgbanwe a, ma ritekwa uru nke ịhazi ahịrị nke ntinye idide.
Mgbasa ozi Desktọpụ Conky
En MX-Linux kwuru ngwa arụnyere (Onye njikwa), kama n’ime DEBIAN ọ ga-adị mkpa iji wụnye ya. Ozugbo arụnyere na ahazi, ihe niile ị ga - eme bụ ịhọrọ ma hazie Conky ahụ nke anyị họọrọ.
Ikwado maka ịhazi nke .bashrc faịlụ mgbọrọgwụ na onye ọrụ.
Nye nkwado maka omume dị elu, dịka nchịkọta kernel ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ.
Nye nkwado maka ngwa dị mkpa maka ndị ọrụ toro eto (multimedia, gamers, mmepe, n'etiti ndị ọzọ).
Nye nkwado zuru ezu maka mkpakọ / decompression ọrụ na Sistemụ arụmọrụ.
Wụnye ngwa mgbakwunye na ngwa ndị dị mkpa (dị mkpa na / ma ọ bụ bara uru) ruo na Terminal Interface (CLI).
Wụnye mgbakwunye na ngwa ndị dị mkpa (dị mkpa na / ma ọ bụ bara uru) ruo na nke Graphical Interface (GUI).
Wụnye nchịkọta (ihe dị mkpa na / ma ọ bụ bara uru) oge ezumike na egwuregwu (egwuregwu) nchịkọta ngwa maka ndị ọrụ nkịtị (ụlọ ọrụ akpaaka).
Na nke m, na-agba ọsọ a na usoro na MX-Linux Distro 19 n'ịwa m ihe eji ebugharị ọhụrụ na nke nwere ike itinye ISO na a oke nhazi na njikarịchaihe m na-akpo "Ọrụ ebube", ugbu a na gị 2.0 mbipute. Machị ihuenyo ka i wee hụ nsonazụ ya:
Ruo ugbu a, akụkụ mbụ nke nkuzi a. Na akụkụ nke abụọ anyị ga-ekwu na nchịkọta ndị ọzọ (ngwa) ka akwadoro ka ị gaa n'ihu na-eme ka (Distric) gbasaa DEBIAN 10 na MX-Linux 19.
Anyị na-atụ anya na esta "bara uru obere post" banyere «DEBIAN y MX-Linux», na ụdị ya kachasị ọhụrụ na nke ugbu a maka afọ 2020, iji nweta «actualizarlas y optimizarlas», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke okike, gigantic na eto eto nke ngwa nke na maka «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Melite ma bulie MX-Linux 19.0 na DEBIAN 10.2 mgbe ị wụnyechara
Dị ka m maara na ibe MX gọọmentị enweghị MX-19_December_x64.iso Ma mgbe ịpịrị njikọ njikọ ahụ ha hapụrụ n'isiokwu ahụ, ebudatara 0 bit ISO.
Ekwenyere m na isiokwu a tupu ịme nke ọma ga-emepụta nsogbu maka ndị na-agbaso ntuziaka ndị ahụ.
Nkwado m: budata ISO site na saịtị MX; wee wụnye ma hazie iji kwado mmadụ niile.
Daalụ, ezigbo Gerson. Aga m copyomie ebe azịza m nyere gị na Telegram:
M edozila njikọ mebiri emebi! N'oge a na-ede edemede ahụ ma ọ bụrụ na enwere ISO zuru oke nke MX-19_December_x64.iso, dịka m gosiri gị nseta ihuenyo na ISO ebudatara, mana ọnyà niile sitere na Disemba dị ugbu a na efu (0) kb.
Mgbe m ibudatara ya ọ zuru oke, mana echere m na mmadụ tinyere repo na 0 Kb ma ha niile mekọrịtara dị ka nke a. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụghị m kpatara ya. Ebe ọ bụ na anaghị m ejigide ya, ebudatara m ya zuru oke. Na agbanyeghị nke ahọrọ MX-Linux enyo, eserese Disemba bụzi efu, mana nchikota ego dị.
Ma emezila m njikọ ahụ, ya mere, ekele maka okwu a bara uru. Daalụ maka ikwu!
Na nzube; You nweela ike ịwụnye kernel liquorix site na ebe nchekwa anụ ahụ?
Daalụ, Gerson! Mba, mana m ga-eme edemede banyere ya na isi okwu. Daalụ maka okwu gị.
Ndewo, nke mbụ, ana m ekele gị nke ukwuu maka ọkwa ahụ, ọ bụ nnukwu enyemaka iji bido mana m ga-achọ ịma ihe iwu ọ bụla na-eme, ụfọdụ m maara ma ndị ọzọ amaghị, echere m na ndị ọzọ ga-eme nke ọma ịmata ihe ha bụ. Ana m ekele gị ọzọ
Zaghachi Osvaldo santos
Nnamdi Nwachukwu dijo
Ọ ga - ekwe omume ka ị gbakwunye kernel Liquorix kernel na iso gị iji bulie ma mepụta ISO ọhụrụ? Apụghị m ịhụ njikọ download gị v2.0 mbipute 🙁
Daalụ JonathanMG! M bulitebeghị 2.0 ahụ, mana m nwalere Liquorix Kernel na ya ahụbeghị m nsogbu na ya. Ọ gaghị abịa agakọ, ma m ga-ekwu na i nwere ike ịnabata ya na-enweghị nsogbu.
Ọ dị mma na enweghị m ike ịchọta nsụgharị 2.0 iji budata, olee mgbe ọ ga-adị? Ọ ga-abụ nnọọ ihe bara uru na n'ime usoro ọ ga-ahapụ gị ka ị họrọ mgbe ị ga-etinye ya, ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ tinyere nke kwụsiri ike ma ọ bụ nke na-adịghị agbanwe agbanwe, enwere m olileanya na ị ga-atụle okwu m ebe ọ bụ na enweghị distro na-enye gị nhọrọ ahụ
Depụta nwelite ọhụụ maka Ngwa KDE 19.12.1